Mampiaraka tranonkala maimaim-poana amin’ny aterineto
Mampiaraka toerana Vahiny eto dia afaka hahita ny ankizilahy na ny ankizivavy dia avy amin’ny fampiononana ao an-trano.
Tsy tokony handeha any ho any, mandany fotoana teny an-dalana na ny vola miditra. Fotsiny mandeha an-tserasera, ary manomboka mifampiresaka amin’ny ireo izay nahasarika ny saina.
Maimaim-poana ny Mampiaraka toerana ho an’ny lehibe sy ny fifandraisana Maoderina sy aina fomba mba hahita ny namany, ny namana, ny mpiaramiasa ary na dia ny fitiavana. Ao ny lehibe ny taona sy ny amin’izao fotoana izao haingana ny fiainana, tsy ny rehetra no manana ny fotoanany sy ny heriny mba hitsidika ny toerana izay afaka hihaona olona vaovao ary mifandray aminy, ao amin’ny rivotra iainana aina.
Maimaim-poana ny Mampiaraka toerana efa ela hita ny zo misy. Ny fanampiana, maro ny olona efa nahita ny tsirairay ary na dia ny farany dia nanatevin-daharana ny destinies. Ny fifandraisana amin’ny hafa, dia nahazo fahafahana hianatra bebe kokoa momba ny interlocutor, ary somary fohy ny fotoana. Rehefa velona ny fifandraisana dia tsy azo atao foana mba hahatakatra ny zavatra ny olona ao aloha ianareo, raha mbola ao amin’ny taratasy mba hahitana ny valin’io fanontaniana io dia mora kokoa. Ankoatra izany, miresaka ny alalan ny toerana, ny olona dia tony kokoa ny maha-ao amin’ny mahazatra sy mampahazo aina ny tontolo iainana. Noho izany, malalaka ny Fiarahana amin’ny tranonkala dia hamela anao mba hianatra izay raha ny marina ny olona tsy ara-tsosialy ny saron-tava.
Mampiaraka toerana Vahiny dia mamela anao mba handalina tsara ny vaovao rehetra ao amin’ny mombamomba ny lazaina fa resaka, alohan’ny hanombohana ny fifanakalozan-dresaka miaraka aminy. Ny sary izay miaraka ny fanontaniana dia hanome hevitra momba ny toetoetry ny vaovao pen PAL.
Afa-tsy, ety an-tserasera ny olon-kafa manana intuitive interface tsara. Noho izany, na dia Aterineto savvy afaka mianatra haingana ny rehetra ireo fitsipiky ny fampiasana sy ny manaporofo fa ny mahavariana sy mampientanentana ny tontolo virtoaly ny Fiarahana.
Saingy tsy mitsaha-mitombo isa ny vaovao mombamomba antoka: leo ny eto fotsiny ianao tsy manana